Jeneraly - Vaovao Gadget | Vaovao Gadget (Pejy 7)
Apple dia nanakana maodely Apple Watch maromaro manamafy ny fahatongavan'ny Apple Watch Series 3
Apple dia nanakana ny kinova sasany an'ny Apple Watch, manamafy fa afaka mahita ny Apple Watch Series 3 vaovao isika anio.
Aiza sy oviana no hahitana ny Apple Keynote izay anolorany ny iPhone X
Amin'ny 12 septambra amin'ny 19:00 hariva ora Espaniola, iray amin'ireo hetsika ara-teknolojia andrasana indrindra amin'ity taona ity no hanomboka, ny Keynote an'i Apple.
Ampifanaraho amin'ny Windows 10 ny fampandrenesana iOS na Android
Azavainay ny fomba fampifanarahana fampandrenesana eo amin'ireo fitaovana misy Windows 10 sy ireo fitaovana misy Android sy iOS hahafahanao manatsotra ny fiainanao
Ny iPhone X dia hanasongadina ny processeur hexa-core voalohany an'ny Apple, ny A11 Fusion
IPhone X dia hanomboka ny processeur enina core voalohany an'ny Apple, ny chip A11 Fusion, miaraka amina core enti-miasa avo 2 sy mahomby amin'ny angovo 4
Xiaomi dia aingam-panahy avy amin'ny Apple MacBooks ary manolotra ny Mi Notebook Pro vaovao
Xiaomi androany dia nanolotra ny Mi Notebook Pro vaovao, solosaina aingam-panahy avy amin'ny Apple's MacBook ary vidiny 900 euro.
Ny Xiaomi Mi MIX 2 vaovao dia efa ofisialy ary tonga vonona hijoro amin'ny sainam-pirenena rehetra eny an-tsena
Xiaomi dia nanolotra ny Mi MIX 2 vaovao izay tonga eo an-tsena vonona hijoro amin'ny sainam-pirenena rehetra misy anio.
Tsy ho tonga irery ny iPhone X ary ho tonga rahampitso ny Apple Watch Series 3
Ny fivoahan'ny kaody iOS 11 dia nahafahantsika nahafantatra fa tsy ho tonga irery ny iPhone X vaovao, ary hiaraka amin'ny Apple Watch Series 3 izy io.
Inona no mety ho lavaka mainty faharoa lehibe indrindra amin'ny Milky Way nahagaga azy
Vondron'ireo astronoma japoney no nanambara ny fahitana ilay efa heverina ho lavaka mainty faharoa lehibe indrindra ao amin'ny Milky Way.
Efa nieritreritra momba ny fiara ve ianao amin'ny taona 2040? Jaguar eny ary manolotra ny heviny voarakitra ao amin'ny Jaguar FUTURE-TYPE
Atorinay anao ny fomba hahitana ny IP an'ny olona amin'ny alàlan'ny hafatra amin'ny Facebook ary tsy fantatr'izy ireo. Raiso ny IP misy olona amin'ireto tetika ireto
Mandeha any tsy misy hatak'andro intsony izahay ary miroso amin'ny atiny tsara indrindra amin'ny andiany, sarimihetsika ary fanadihadiana ao amin'ny Netflix, HBO ary Movistar amin'ny volana septambra,
Miasa amin'ny lamasinina afaka mahatratra 4.000 km / ora i Sina
Fidirana izay hiresahantsika momba ny tetikasa sinoa vaovao mikasa ny hamorona fomba fitaterana revolisionera afaka mahatratra 4.000 km / ora.
Ny fanafihana an'i EQUIFAX dia miafara amin'ny halatra fampahalalana miavaka amin'ireo mpampiasa 143 tapitrisa
Vondron'olona mpijirika no nahavita nangalatra angona tsy latsaky ny 143 tapitrisa avy amin'ny andrim-bola EQUIFAX, sampana iray an'ny ASNEFF.
Google dia manambara ny fiafaran'ny fampiharana Google Drive ho an'ny Mac sy PC
Ny fampiharana Google Drive ho an'ny Mac sy PC dia hanjavona amin'ny volana martsa 2018 soloina solo Google vaovao
Raffle ny takelaka Elements Terra 7 QCI izahay
Vaovao tsara ho an'ny mpamaky rehetra an'ity tranonkala ity, nanomboka androany izahay dia mitondra fifaninanana mahaliana izay ...
Ny Twitter dia efa mamela antsika hampihetsika ny maody amin'ny alina amin'ny pejin-tranonkala
Rehefa afaka volana maro niandrasana dia azontsika atao ihany ny mamela ny maody alina amin'ny tranokala Twitter ho an'ny birao
Mitadiava fampiharana 4 hanamboarana sary simba mba tsy hahavery ireo sary manan-danja amin'ny fotoana manokana. Azo atao ny mamerina sary simba.
Google dia hanatsara ny fakan-tsary Street View afaka valo taona miaraka amin'ity teknolojia ity ihany
Hanatsara ny fakan-tsary ampiasaina amin'ny Google Street View i Google. Manomboka izao dia azo atao ny manangona fampahalalana mifandraika bebe kokoa ho an'ny mpampiasa
Manomana ady amin'ny YouTube ny Facebook
Facebook te-hijoro amin'ny YouTube ary hanao izany amin'ny alàlan'ny fanolorana dolara an-tapitrisany amin'ireo tompon'ny zon'ny mpamorona mozika
Nissan LEAF 2018, ity no herinaratra vaovao mivarotra indrindra any Espana
Nissan LEAF 2018 no taranaka faharoa amin'ity modely ity. Mahery kokoa izy io, miaraka amin'ny fizakan-tena lehibe kokoa ary miaraka amin'ny teknolojia fanampiana vaovao
Fa maninona no manana layout toy izany ny kitendry QWERTY
Raha efa nanontany tena ianao hoe maninona ny keyboard QWERTY no manana an'io fandaharana io, anio dia hiresaka momba io fanontaniana mahaliana io isika.
Apple Pay dia mitombo, nefa mbola kely ny tratrany any Espana
Ny orinasa Cupertino dia nanambara fa andrim-panjakana telo ambin'ny folo vaovao no niditra tamin'ny sehatra tany Etazonia.
Nanandrana ny Call of Duty izahay: WWII ary izao no zavatra niainantsika
Notsapainay ny Call of Duty: WWII hahafahanay milaza aminareo voalohany ny zavatra niainantsika tamin'ny Beta amin'ity lalao ity.
Kaonty 28 tapitrisa no voajirika tao amin'ny Taringa
Ny tranokala manan-danja farany izay voajirika dia ny Taringa, izay niaritra fangalarana kaonty 28 tapitrisa
Nanamafy tamin'ny fomba ofisialy i Tesla fa hanokatra ny magazay voalohany ao Espana ao an-tanànan'i Barcelona. Izahay koa efa manana adiresy izay hahitana azy.
Jereo hoe ahoana ny fomba hijerena ireo fisie vao tsy ela akory izay ao amin'ny Windows 10. Raha tsy nahita ny antontan-taratasinao vao haingana tao amin'ny Windows 10 ianao dia vakio ity fampianarana tsikelikely ity.
Sayer, familiana marani-tsaina avy any Jaguar hiaraka aminao amin'ny ho avy
Sayer no familiana hendry an'i Jaguar izay te-hiaraka amin'ireo mpamily ho avy rehetra ho mpanampy azy manokana
Izahay dia mamakafaka ny fakantsary fanatanjahantena 4K AC-LC2 avy any Aukey
Ny orinasa Aukey dia namela anay hizaha toetra ny AC-LC2 miaraka amin'ny vahaolana 4K ary io no zavatra niainantsika aorian'ny fampiasàna an'ity fakantsary ity nandritra ny andro maromaro.
Reddit dia manala ny fidirana amin'ny kaody loharano misy azy
Ireo tovolahy ao amin'ny Reddit dia nanapa-kevitra ny hanala ny fidirana amin'ny kaody loharano feno ao amin'ilay tranokala, kaody misy hatramin'ny namoronana azy
Telegram 4.3 dia misy amin'ny fanatsarana vaovao ary vonona ny hanohy hifaninana amin'ny WhatsApp
Telegram dia nandefa fanavaozana vaovao miaraka amin'ny fanatsarana sy vaovao mahaliana, izay hanohizany hifaninana amin'ny WhatsApp, ny mpanjaka fandefasan-kafatra.
Ny karatra microSD vaovao an'i Sandisk dia manome tahiry 400 GB
Sandisk dia nanolotra ny karatra microSD vaovao ao amin'ny IFA 2017, izay nanjary vaovao tamin'ny fanolorana tahiry 400 GB ho anay.
Panasonic koa dia manana mpandahateny mahay miaraka amin'ny Google Assistant
Panasonic dia hanana mpandahateny mahay ihany koa. Izy io dia ny Panasonic SC-GA10 ary miasa eo ambanin'ny mpanampy Google Assistant
Hitanay ireo mpamokatra fanomezana lehibe indrindra mba hahafahanao manome fanomezana an-tserasera noho ny anarana na izay ilainao. Ampidiro ary alamino ny raffle-nao!
Segway dia nanangana scooter herinaratra roa vaovao hahafahana mivezivezy hatramin'ny 35 km amin'ny fiampangana tokana. Izy ireo no Segway miniLITE sy miniPLUS
Daimler dia manana ny fahitany manokana ny amin'ny ho avin'ny carsharing. Ary manao izany amin'ny alàlan'ny maodely fahitana EQ fortwo: fiara mandeha amin'ny herinaratra sy mizaka tena.
MINI miaraka amin'ny vondrona BMW dia naneho topy maso ny MINI elektrika. Ity ny MINI Electric Concept ary hamidy amin'ny 2019
Dory ISO ho DVD
Fampiharana 5 handoro ISO amin'ny DVD na media hafa toa ny CD-ROM na Bluray. Raha mila mandoro sary ISO amin'ny DVD ianao, dia hasehontsika anao ny fomba.
Kirin 970, ilay mpikirakira voalohany miaraka amina singa Artigence Intelligence
Rahampitso Huawei dia hanolotra ny Kirin 2017 ao anatin'ny rafitry ny IFA 970 na izay mitovy, ilay mpikirakira voalohany miaraka amina singa Artificielle intelligence.
Alcatel dia manolotra ny Idol 5 vaovao izay mirehareha amin'ny famolavolana sy ny fakantsary ho an'ny vidiny mihena
Ny Alcatel Idol 5 vaovao dia ofisialy ankehitriny taorian'ny nanolorana azy tamin'ny rafitry ny IFA 2017 izay tazonina any Berlin ankehitriny.
Ny taratasy, avy amin'ny Dropbox, dia manatsara ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Sketch, lahatahiry ary maro hafa
Dropbox Paper dia manatsara ny tontolon'ny fiaraha-miasa misy anao amin'ny alàlan'ny fampidirana endri-javatra vaovao toy ny Folders, Archive, Sketch integration, sns.
Ireo no vaovao natolotr'i Sony tamin'ny hetsika IFA 2017 nataony
Niasa tokoa i Sony tao amin'ny IFA 2017 ary amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fitaovana rehetra natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Izy ireo dia mangalatra ny angon-drakitra mpampiasa malaza ao amin'ny Instagram
Instagram dia manamafy fa niharan'ny fanafihana iray izay nanome ny olon-dratsy fidirana amin'ny angon-drakitra manokana momba ny kaonty malaza sasany
Te hamorona graffiti ve ianao? Ireo no rindranasa sy tranonkala tsara indrindra hanaovana graffiti anarana MAIMAIM-POANA. Fantatrao ve ny mpamorona graffiti? Jereo!
Ofisialy io, Apple dia hanolotra ny iPhone 8 amin'ny 12 septambra
Vao avy nanamafy tamin'ny fomba ofisialy i Apple fa amin'ny 12 septambra dia hanao hetsika izay ahitantsika ilay iPhone 8 vaovao.
Fa maninona ny USB-HUB no manatsara ny biraoko? [REVIEW AUKEY]
Androany izahay dia manao ny fandalinana USB 3.0 HUB roa avy any Aukey mba hanomezana hevitra momba ny fomba hanamorana ny fiainanao ity gadget ity.
Primux ioxbook 1402f, laptop amin'ny vidin'ny aretim-po [REVIEW]
Androany izahay dia hanolotra solosaina finday natokana ho an'ireo izay mampiasa fototra ny PC nefa tsy mahafoy ny endrika, hazavana ary fahaleovan-tena, ny Primux ioxbook 1402f.
Ilay Samsung Gear Sport vaovao dia hita eo amin'ny takelaka takelaka takelaka talohan'ny fampisehoana ofisialy azy amin'ny IFA 2017
Ilay Gear Sport vaovao dia hita mialoha, manamafy amin'ny fomba ofisialy ny fanoloran-tena raisin'i Samsung amin'ny smartwatches.
Ahoana ny fomba hijerena sy hisintomana ny katalaogan'ny IKEA 2018
Efa natomboka ny katalaogy IKEA 2018 vaovao. Lazainay aminao ny fomba hankafizanao ny vaovao rehetra rehefa tonga ny fanontana pirintinao
Hadinon'i Aston Martin koa ny gazoala sy lasantsy, hybrid sy herinaratra rehetra
Manatevin-daharana ny fironana i Aston Martin ary maniry ny ho lasa hybrid na herinaratra tanteraka ny andian-tsambony amin'ny tapaky ny taona 2020
Manova ny sary famantarana ny YouTube ary manampy fiasa vaovao
Ilay serivisy horonantsary YouTube streaming malaza dia nanova ny sary famantarana azy ary nohavaozina taorian'ny 12 taona niainany. Tonga koa ireo fiasa vaovao
Ahoana raha afaka mifoka ny andian-tsarimihetsika Netflix tianao ianao?
Nandritra ny hetsika manokana tany California, Netflix dia nivarotra marijuana ara-pahasalamana nentanin'ny sasany tamin'ireo andiany voalohany
Mivezivezy 300% ny varotra fiara hybrid plug-in
Ny Plana Movea dia nanampy ny fivarotana fiara elektrika madio sy hybrida plug-in hitombo amin'ity volana aogositra ity
Google Chrome dia hamela antsika hanala ny feo amin'ny pejin-tranonkala mandrakizay
Ny iray amin'ireo lahasa lehibe indrindra izay horaisin'ireo kinova Chrome manaraka dia hita ao amin'ny safidy hanafoanana ny feon'ny tranonkala iray
Mampitandrina ny ESA fa ny asteroid dia handalo akaiky ny Tany amin'ny 12 Oktobra
ESA, ny European Space Agency, dia nanambara fa nahita asteroid izay handalo akaiky ny Tany amin'ny 12 Oktobra izy ireo.
Ny kamio mizaka tena voalohany dia tafita tamim-pahombiazana tany Etazonia
Ny fitsapana tena izy ny kamio mahaleo tena dia notanterahina tany Etazonia. Ary fahombiazana iray izay hitazomana ny teknolojia handeha
Mampanantena supercar elektrika miaraka amin'ny 1.180 hp i Ariel
Ny orinasa britanika Ariel dia handefa supercar elektrika eny an-tsena izay mampanantena hery lehibe indrindra 1.180 hp sy torkia 1.800 XNUMX Nm
Nahavita nitahiry terabytes 330 tamin'ny sombin-kasety kely andriamby i IBM
Fanambarana iray avy amin'ny IBM no milaza amintsika fa nahavita nitahiry fampahalalana 330 terabytes tamina kapila kely misy andriamby izy ireo.
Voasazy higadra 5 taona an-tranomaizina ny filoha lefitra Samsung
Farany, nifarana ny fitsarana miandry ny filoha lefitry ny Samsung ary nomelohin'ny fitsarana an-tranomaizina 5 taona izy
Manidy kaonty tapitrisa mahery isan'andro ny Facebook
Ny tambajotra sosialy Facebook dia manidy kaonty tapitrisa mahery isan'andro izay manitsakitsaka ny politikan'ny orinasa
Azonao atao izao ny mampiasa ny navigateur Samsung amin'ny smartphone Android "rehetra"
Nanambara i Samsung fa ny Internet browser Samsung Internet Browser azy dia azo ampiasaina amin'ny finday Android rehetra izao
NASA hiankina amin'ny rafi-pitsikilovana artifisialy Intel hijerena ny habakabaka
NASA dia nanambara fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny Intel hampiasa ny rafi-pitsikilovana artifisialy amin'ny famakafakana ny angon-drakitra masoivoho.
Afaka maka sary panoramic sy 360º ianao izao nefa tsy miala amin'ny Facebook
Fanavaozana vaovao amin'ny Facebook no ahafahan'ny mpampiasa maka sy mizara sary panoramic sy 360º nefa tsy miala amin'ny rindranasa finday
Tonga ny Samsung Galaxy Note 8, izao no tokony ho fantatrao
Ny Samsung Galaxy Note 8 dia tsy isalasalana fa hahita izany mihoatra ny telefaona ianao. Fitaovana iray noho ny antony maro izy io
Lisitry ny terminal izay mifanaraka amin'ny Android Oreo
Asehonay anao ny lisitr'ireo maodely rehetra ankehitriny sy ho avy izay mifanaraka amin'ny Android Oreo
Izahay dia mamakafaka ny monitor 4K UHD Philips 241P6 mahatalanjona
Androany dia eo am-pelatanantsika ny Philips 241P6, mpanara-maso 24-inch miaraka amin'ny vahaolana 4K UHD miaraka amina endrika matihanina sy gamer.
Ao amin'ny Facebook ianao dia hahita tolotra tsara ... avy amin'ny fivarotana sandoka
Mampitandrina ny fisian'ny doka sy ny famoahana amin'ny Facebook momba ny fivarotana sandoka mangalatra angona avy amin'ireo mpampiasa ny birao fiarovana ny Internet
Android Oreo: voamarina ny anarany ary ireo no vaovao lehibe ao
Google dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny kinova vaovao an'ny rafitry ny finday sy ny takelaka: Android Oreo na Android 8.0
Tombontsoa amin'ny fiasana amin'ny efijery roa
Roa tsara noho ny iray? Handeha hamantatra izay tombony sy aretin'andoha amin'ny fiasana amin'ny mpanara-maso roa izahay.
Malware vaovao Android mangalatra ny angona karatrao
Ilay kinova malware vaovao sy be pitsiny kokoa dia mandrahona ny hangalatra angona fandoavam-bola avy amin'ireo mpampiasa fitaovana Android
Ny Electronic Arts dia manakana ny fampandrosoana ny Mass Effect: Andromeda
Mass Effect: Andromeda dia najanona tamin'ny endriny mpilalao tokana ho an'ny sehatra rehetra, voamarina fa tsy hisy DLC ho an'ny lalao.
Electric VW Microbus nohamafisin'ny orinasa tamin'ny 2022
Vao avy nanao fanambarana mahaliana ny orinasa alemà Volkswagen: hanangana modely elektrika vaovao izy amin'ny 2022: VW Microbus electric
Google dia manolotra antsika hampiasa sira mba hitahirizana angovo azo havaozina
Ny iray amin'ireo asa farany nataon'ny departemantan'ny fikarohana X an'ny Google dia nahavita nitahiry angovo azo havaozina amin'ny batterie masira.
Product Graveyard, ity no toeram-pandevenana ireo vokatra tadidy
Tadidinao ve ireo vokatra misotro ronono toy ny Google Reader, Windows Live Messenger na Picasa? Angonina daholo ao amin'ny Product Graveyard
Hiseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 21 aogositra ny Android O
Android 21 dia hatao amin'ny fomba ofisialy amin'ny XNUMX aogositra. Izany hoe hizara ny masirasira amin'ny eklipsa amin'ny masoandro manaraka izy io
Xiaomi Mijia M365, scooter elektrika revolisionera amin'ny € 319 fotsiny
Ny scooter elektrika dia tsy fitaovana nahazo laza malaza loatra tany Espana, tsy handainga amin'ny tenantsika isika. Tsy misy…
Beckham dia ho masoivoho Legend ao amin'ny PES 2018
Ilay sampy britanika David Beckham dia ho masoivoho Legendan'ny PES 2018, manao sonia fifanarahana manokana miaraka amin'ny Konami Japoney, mpamorona ny PES.
Ilay filahiana nasehon'i Microsoft anay tamin'ny pejy fandraisana an'ny motera fikarohana
Microsoft dia nampiasa ny sarin'ny morontsiraka mahafinaritra any Kroasia izay ahitantsika ny sarin'ny filahiana.
Spectrum, fomba tena mahavariana hametrahana gadona ny rantsan-tananao
Avadiho ho feo ny loko ary mamorona feon-kira manokana. Izany no fikasan'ny Specdrums, peratra sasany izay ...
Tsy mandeha intsony ny baterin'i Samsung, na dia tsy io aza no tompon'antoka tamin'ity indray mitoraka ity
Ny Kaomisionan'ny fiarovana ny vokatra ho an'ny mpanjifa (CPSC) dia manambara ny fanoloana bateria tsy mandeha amin'ny telefaona Samsung iray hafa, ny Note 4
Google dia hampahafantatra antsika ny vinavinan'ny vovobony amin'ny tontolo iainana
Ireo tovolahy ao amin'ny Google dia te hanampy ireo mpampiasa tsy mahazaka vovobony ary hanome vaovao momba ny haavon'ny vovobony avy hatrany.
Ahoana ny fomba hanarahana ny fanakona-masoandro amin'ny alatsinainy 21 aogositra
Ny alatsinainy 21 aogositra ho avy izao dia hisy ny fanakonam-bolana. Lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hankafizanao azy tanteraka
Akanjo tsara tarehy ny akanjo antonony, mamakafaka ny LG Q6 izahay
LG Q6, ilay maodely mitafy ny mid-range. Andao hojerentsika ny fihodinan'ity fitaovana ity ary raha toa ka mahomby toa ity izy ity amin'ity famerenana ity.
Manatsara ny Windows 10
Ireo fitaka ireo dia hanampy antsika hanatsara ny Windows 10 ary hahatonga ny solosainantsika hiasa tsara kokoa, haingana kokoa ary tsy manome antsika olana be loatra.
«Fandraisana avy hatrany», na ny fomba fanangonana ny fividiananao avy any Amazon ao anatin'ny 2 minitra fotsiny
Amazon dia manokatra Instant Pickup any Etazonia, teboka fanangonana izay ahafahan'ny mpampiasa manangona ny fividianany ao anatin'ny roa minitra fotsiny
Google Allo dia mandefa kinova an-tranonkala (miaraka amin'i Chrome ihany)
Google Allo, serivisy fandefasan-kafatra alfabeta (Alphabeta) (Google) dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny mpitety tranonkala ankehitriny
Ny maha-zava-dehibe ny fihetsika marina rehefa mampiasa PC
Izany no antony hiresahantsika kely momba ny maha-zava-dehibe ny fitazonana fihetsika marina rehefa mampiasa PC, hisorohana ny ratra sy ny fanaintainana ambany.
Ny dinôzôro Google Chrome dia tonga amin'ny endrika lalao ao amin'ny Google Play
Tonga hatrany amin'ny Google Play ny dinôzôro Google Chrome, amin'ny endrika lalao maimaimpoana tanteraka, ary nomena anarana hoe The Jumping Dino
SPC One Speaker, mpandahateny ho an'ny mpihaino rehetra [REVIEW + SWEEPSTAKES]
Midira ary aza hadino ny zavatra holazainay aminao momba ny One Speaker avy amin'ny SPC, satria ho mora be ny fahazoana iray ary hiaraka aminao hatraiza hatraiza.
Facebook Marketplace dia tonga tany Eropa hiady amin'i Wallapop
Taorian'ny fanambarana ny Facebook Marketplace tamin'ny Oktobra 2016 tany amin'ny firenena vitsivitsy dia te-hanitatra ity serivisy fividianana sy fivarotana ity any Eropa ny orinasa
Very ny fitoriana an'i Edgar Davids, mpilalao baolina kitra
Edgar Davids dia nandresy tamin'ny Riot Games noho ny fampiasàny ny hodiny tamin'ny hoditra League of Legends ary tsy maintsy manonitra azy izy ireo.
Ireo hacker izay nangalatra atiny tao amin'ny HBO dia mbola manao ny azy ihany
Reraka ny HBO milalao saka sy totozy amin'ireo hackers niditra amin'ny lohamilina ary nanambara fa tsy hilalao ilay lalao.
Nesorin'i Amazon ny solomaso sandoka mba hahitana ny tako-masoandro amin'ny 21 aogositra 2017
Amin'ny 21 aogositra dia hisy fanakona-masoandro. Ary efa mivarotra solomaso sandoka ireo mpisoloky ka afaka mahita ny hetsika mivantana izy ireo
Rindrambaiko Android hatramin'ny 4.000 no mety ho mpitsikilo aminao
Ny manam-pahaizana momba ny fiarovana sasany dia nahita fa misy fampiharana Android mihoatra ny 4.000 izay mety mitsikilo izay ataonao amin'ny findainao
Ny NASA dia te-hitsapa raha azo atao ny miaro ny Tany amin'ny asterôida
Hiezaka ny NASA hizaha raha tena azo atao ny miaro ny Tany amin'ny fiatraikan'ny asterôida amin'ny tetikasa iraisana amin'ireo masoivohon'ny habakabaka hafa.
Ny sambo interstellar voalohany dia efa manidina amin'ny habakabaka
Vondronà mpikaroka iray no nahavita namolavola sy nandefa ny sambon-danitra voalohany sy tokana misy ny interstellar namboarina hatramin'izao.
Ahoana ny fametrahana fonosana fiteny amin'ny Windows
Aiza no hampidina ny teny espaniola amin'ny Windows 7 na Windows 10? Mitadiava fika hametrahana na hamafana fonosana fiteny amin'ny Windows
Ny International Space Station dia havaozina miaraka amin'ny supercomputer vaovao
Rehefa avy nandramana nandritra ny fotoana naharitra, farany ny International Space Station dia hampiasa supercomputer vaovao sy feno.
Mpijery sary Windows 10
Matetika dia somary mankaleo sy miadana ny mpijery sary Windows 10. Izany no antony ampianaranay anao hiverina any amin'ny Windows Image Viewer ao amin'ny Windows 10.
Ny BlackBerry Glass Glass Kanadiana dia manatevin-daharana ny sarin'akanjo «entina» ho an'ny orinasa
BlackBerry dia miditra tanteraka amin'ny tontolon'ny akanjo misy solomaso maranitra: BlackBerry Glass. Miorina amin'ny maodely Vuzix M300 izy ireo
Ahoana ny fomba fampidinana mozika avy amin'ny YouTube amin'ny VidToMp3
Atorinay anao ny fomba fampiasana VidtoMP3 sy safidy hafa hisintomana mozika, horonan-tsary ary hira maimaimpoana avy amin'ny YouTube amin'ny endrika MP3.
iBedFLEX mitondra antsika ny fandriana marani-tsaina miaraka amin'ny fampiharana finday
Ny fandriana manan-tsaina vaovao, iBedFlex dia mikendry ny hamela antsika handamina sy hahafehy ny fotoanantsika fialan-tsasatra tanteraka, hiala sasatra tsara kokoa amin'ny iBedFlex.
Jerevo, izany no anaran'ilay sehatra an-dahatsary an-tariby an'ny Facebook
Ireo tovolahy ao amin'ny Mark Zuckerberg dia miasa amin'ny serivisy video streaming vaovao hifaninana amin'ny YouTube sy Netflix.
Diovy sy hanafainganana ny fiasan'ny PC-nao amin'ny Nero TuneItUp
Noho ny rindrambaiko Nero TuneItPro, azontsika atao tsara ny manatsara ny fahombiazan'ny PC ao anatin'ny segondra vitsy.
Mazda SKYACTIV-X, ilay motera tsy misy faran'izay mahomby
Mazda dia nanolotra ny motera lasantsy vaovao. Natao Batemy ho SKYACTIV-X izy ireo ary matanjaka sy matanjaka kokoa noho ny ankehitriny
Sharp AQUOS S2, finday misy efijery izay mitana mihoatra ny 80% amin'ny velarana
Sharp dia namoaka ny finday avo lenta farany: ny Sharp AQUOS S2. Ny zavatra mahavariana indrindra izay ho hitanao dia ny efijery izay mitana mihoatra ny 80% amin'ny habakabaka.
Uhans Note 4, ilay telefaona 5,5-inch izay misy RAM 3GB sy maro hafa, azonao atao amin'ny € 100 izany, jereo tsara ny fanadihadianay.
Ny vidin'ny Bitcoin dia hidina mihoatra ny 3.500 $, iray volana aorian'ny latsaka ambany $ 1.900.
Sonic Mania, ny lalao mahatalanjona manome voninahitra ny saga Sonic iray manontolo
Nanapa-kevitra ny SEGA fa hanome voninahitra azy amin'ny konsole rehetra misy miaraka amin'i Sonic Mania, lalao vaovao izay hiarahan'izy rehetra miaraka.
Hatramin'ny 1078km dia azo zahana amin'ny fiampangana tokana miaraka amin'ny Model X an'ny Tesla
Ny rakitsoratra fizakantena farany an'ny Tesla Model X dia miorina amin'ny 1078 kilometatra
Despacito dia efa horonantsary be mpihaino indrindra ao amin'ny YouTube
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nampahafantarinay anao ny hafainganam-pandeha amin'ny resaka fanontana maro izay ananan'ny horonantsary Despacito, a ...
Navoaka tamin'ny Netflix, Movistar + ary Wuaki TV tamin'ny Aogositra 2017
Miaraka amin'ny famintinanay ireo famoahana tsara indrindra ho an'ny volana Aogositra ao amin'ny Netflix sy Movistar + dia tsy halahelo na inona na inona ianao, andao jerena izay vaovao.
Toeram-patantanan'i Amazon ho an'ny drôna amin'ny kamio, fiarandalamby ary sambo
Amazon dia manohy ny heviny amin'ny fandefasana fonosana amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny fampiasana drôna. Ary te hanamboatra modules fikojakojana finday ianao
Toy izao no lalaovin'ny Minecraft amin'ny vahaolana 16K miaraka amina mpanara-maso 16 miaraka
Te hiaina ny zavatra hitranga ianao raha misafidy ny hanao lalao amin'ny 16K, efa ho avo efatra heny noho ny avo indrindra ny fanapahan-kevitra avo lenta hatreto.
Netflix HDR dia tonga amin'ny Sony Xperia XZ Premium, vao manomboka io
Hain'ny Sony tsara ny manao azy tsara ary nahavita nanome valisoa azy i Netflix, nahatonga ireo fitaovana XZ Premium hifanaraka voalohany.
Vao avy nanamafy i Microsoft fa tsy ho ela dia hahatratra ny fivarotana fampiharana ny console i Spotify ka hahafaly ny mpampiasa azy.
Matetika ny fanavaozana ny WhatsApp. Ary ny farany dia misy ifandraisany amin'ny iray amin'ireo fiasa malaza indrindra amin'ny serivisy: ny hafatra am-peo
Samsung Galaxy Note 8 dia hamely ny tsena amin'ny 15 septambra
Ny fahatongavana eny an-tsena an'ny Samsung Galaxy Note 8 dia kasaina ho an'ny 15 septambra ho avy, 3 herinandro aorian'ny fampisehoana azy.
Boeing dia manintona silhouette amin'ny fiaramanidina mandritra ny sidina fitsapana
Ny fitsapana ny motera vaovao an'ny Boeing 17 mandritra ny 787 ora dia tsy tokony hahafinaritra. Ka ny zavatra tsara indrindra dia ny mamorona famoronana sy mamorona làlana tahaka izao manaraka izao
Lisitry ny tontolon-kevitra
Inona ny menio eo amin'ny tontolon-kevitra? Raha hainao ny mitantana ny menio ny zava-misy ao amin'ny Windows dia hamonjy fotoana betsaka ianao hiasana amin'ny solo-sainao. Atorinay anao ny fomba fampiasana azy.
Google liana mividy Snapchat amin'ny $ 30.000 miliara
Toa tapa-kevitra ny hividy i Google raha Snapchat na raha toa ka tamin'ny taon-dasa dia mitazona tolotra 30.000 tapitrisa ho azy.
Tantara Facebook, efa hahatratra ny kinova tranonkala
Ireo tovolahy ao amin'ny Mark Zuckerberg dia mizaha toetra ny mety fampiharana Facebook Stories ao amin'ny pejin-tranonkala desktop
90 andro mifanome tanana amin'ny LG G6, izany no zavatra niainantsika
Nandritra ny 90 andro dia nandramako ny LG G6 ho toy ny finday avo lenta ary ny fahatsapana dia mihoatra ny tsara, tsy mila manasongadina zavatra ratsy indrindra.
Xiaomi dia misongona an'i Fitbit sy Apple ary efa mpanamboatra akanjo azo ampiasaina voalohany eto an-tany
Xiaomi dia manitsaka ilay mpandefa haingam-pandeha ary mihoatra an'i Apple sy Fitbit izay lasa mpamokatra fitaovana azo ampitaina eran-tany
Volocopter, ilay taxi amin'ny ho avy nampiasain'i Daimler
Nisafidy ny taxi amin'ny ho avy i Daimler. Ary noho izany dia naniry ny hampiasa vola amin'ny orinasa Alemana Volocopter sy ny VC200 izy, VTOL mahazaka 2 pax
Noho ny serivisy Mozilla vaovao dia afaka mandefa rakitra hatramin'ny 1 GB izahay
Misaotra nandefa, afaka mandefa rakitra hatramin'ny 1 GB habe izahay amin'ny fomba azo antoka sy miaraka amin'ny fahataperan'ny fotoana
SPC Glow 10.1, takelaka ekonomika tena mahaliana [REVIEW]
Amin'ity famerenana vaovao ity dia sahinay ny mitsapa ny SPC Glow 10.1 azo ampiharina sy mahaliana, takelaka tsy lafo lafo izay manome mihoatra ny.
Ny Tesla Model Y dia afaka tonga aloha
Ny fiara manaraka an'i Elon Musk dia ny Tesla Model Y, SUV vaovao iray izay mety hiorina amin'ny lampihazo ny Model 3 farany teo
Tsy tsiambaratelo intsony ny Samsung Galaxy Note 8: voasivana avokoa ny fiasa rehetra ao aminy
Amin'ny 23 aogositra dia haseho amin'ny fomba ofisialy ny Samsung Galaxy Note 8. Vaovao, na izany aza, efa namoaka ny endri-javatra rehetra
Huawei dia miatrika an'i Apple sy Samsung ary tsy ho ela dia hahatratra azy ireo
Ny orinasa sinoa dia tena mahomby amin'ny resaka varotra ary ny terminal "avo lenta" dia mahomby amin'ny tsena rehetra.
Herintaona taty aoriana dia manambara ny fahombiazan'ny Instagram ny Tantara
Ny tantara dia iray amin'ireo antony lehibe nahatonga ny Instagram ho lasa tambajotra sosialy malaza indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny banga amin'ny tambajotra 3G sy 4G dia mamela antsika hitsikilo
Ny fanitsakitsahana ny filaminana dia manambara fa azo zahana ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny tamba-jotra 3G sy 4G ary mety hitatra amin'ny tambajotra 5G io lesoka io
Soa ihany ny Facebook sy ny tolotra omeny. Ao amin'ny fandinihana farany navoaka tamin'ny fisintoman'ny fampiharana, laharana voalohany ny fampiharana azy ireo
MOW: Minimal Over Wheels, lalao vita any Espana [SWEEPSTAKES]
Amin'ity indray mitoraka ity izahay eto dia hiresaka lohahevitra iray izay toa somary lasa lavitra ivelan'ny tsipika famoahana, avy amin'ny ...
Hisy ny Resident Evil ho an'ny Nintendo Switch, ny Revelations Collection
Fanangonana Revelations Evil Resident, ny voalohany amin'ny saga Capcom malaza izay voamarina ho an'ny Nintendo Switch.
Google Chrome dia afaka mampiditra mpandàla doka
Ny kinova fitsapana an'ny Google Chrome, Chrome Canary, dia mampiditra mpandahatra doka teratany izay efa nozahan'ireo mpampiasa sasany
Uhans A6, fahefana eo an-tananao ambanin'ny valo-polo euro
Izy io dia telefaona misy vidiny mampihomehy izay ahafahantsika mankafy mpamaky rantsan-tànana, chassis aluminium ary maro hafa amin'ny kely indrindra.
Ahoana ny fomba fampidinana sary sy horonan-tsary avy amin'ny Instagram amin'ny fomba tsotra
Mora ny misintona sary sy horonantsary avy amin'ny Instagram ary holazainay aminao ny fomba fanaovana izany amin'ny iOS, Android na solosainao. Fantatrao ve ny fomba fampidinana sary sy horonan-tsary avy amin'ny instagram?
Ny fanaraha-maso nataon'i Apple dia manamafy ny famolavolana ny iPhone 8 sy ny fanekena ny tarehy
Ny famolavolana ny iPhone 8 dia naseho indray, amin'ity indray mitoraka ity noho ny fanaraha-mason'i Apple tenany.
OffLiberty, misintona horonan-tsary lava avy amin'ny youtube
OffLiberty dia rindrambaiko maimaimpoana ahafahantsika misintona horonan-tsary sy mozika avy amin'ny YouTube mankany amin'ny PC, finday na takelaka misy endrika MP4 sy MP3.
Mbola tsy manandratra ny lohany ny Twitter
Ny tambajotra sosialy Twitter dia mitohy nefa tsy mampiakatra ny lohany miorina amin'ny valiny navoakan'ny orinasa nandritra ny telovolana lasa teo
Tesla Model 3 dia ofisialy ary mety ho anao amin'ny $ 35.000
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny fiara Tesla farany teo. Izy io dia ny Tesla Model 3 ary ny vidiny dia manomboka amin'ny $ 35.000
Ahoana no ahalalako izay kapila mangidy misy ahy?
Jereo hoe ahoana no ahafantarako izay kapila mangirana ao amin'ny solosainako amin'ny hafetsena tsotra na fitaovana maimaimpoana maromaro. Inona no maodelin'ny HDD na SSD anananao? Fantaro!
SpaceX dia efa manana Falcon Heavy voalohany vonona
SpaceX dia nahavita nanamboatra ny singa voalohany an'ny Falcon Heavy, balafomanga izay antenain'izy ireo hanombohana ny fanandramana manomboka amin'ny Novambra amin'ity taona ity.
Nanambara i Adobe fa hamela ny fanohanan'ny Flash amin'ny taona 2020 izy
Ireo tovolahy ao amin'ny Adobe dia nanambara ny faran'ny fanohanana ny teknolojia Flash, teknolojia iray izay nanjary tsy nampiasaina tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Sakano ireo fantsona YouTube
Raha te-hanakana ny fantsona YouTube ianao, amin'ny fikafika kely dia hanana fahafaha-manakana ny horonantsary fantsona YouTube izay tsy tianao izahay.
Atody Paska iray miafina ao amin'ny beta efatra amin'ny Android 8.0 no nanomboka nampandrenesina: ny horita ve no anarana homena an'ity kinova vaovao ity?
WhatsApp no ​​fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malaza indrindra eran-tany. Ary ireo tarehimarika nomen'izy ireo avy amin'ny bilaoginy ofisialy dia manamarina izany.
Windows 10 dia manana fanairana, famantaranandro fanairana ary famantaranandro miaraka amina endrika izay natao hisolo ny an'ny finday. Atorinay anao ny fomba fampiasan'izy ireo
Google te-hamaha ny olan'ny fusion nokleary rehetra
Google dia nanambara ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny orinasa Tri Alpha Energy hamolavola rafitra afaka mamaha ny olan'ny fifangaroan'ny nokleary
1492, izany no anaran'ny laboratoara miafina an'i Amazon
Amazon dia manana laboratoara miafina antsoina hoe 1492. Ity iray ity dia miandraikitra ny fandinihana ireo fahafaha-manao ananan'ny orinasa ao anatin'ny sehatry ny fahasalamana
Easy Smart HR, ilay famantaranandro marani-tsaina Cellularline [REVIEW]
Easy Smart HR no famantaranandro marani-tsaina tadiavin'ny Cellularline hisambotra sehatra iray lehibe ho an'ireo mpampiasa, notsapainay tsara izany.
PcDays, raikipohy manome valisoa ho an'ny PcComponentes
PcComponentes dia mahavita mampitombo ny varotra azy amin'ny 60% noho ny fankalazana ireo PcDays efa malaza sy ireo fihenam-bidy mahaliana azy ireo.
PlayStation dia mamaky azy amin'ny lalao PS Plus amin'ny volana Aogositra
Ny antony 3 fotsiny sy ny fanekem-pinoan'ny mpamono olona: hiantsoantsoana ny fahalalahana. Andao hojerentsika ny lalao maimaim-poana amin'ny Aogositra amin'ny PlayStation Plus.
Kaspersky dia mandefa antivirus maimaimpoana ho an'ny Windows
Kaspersky Lab dia mandefa antivirus maimaim-poana ho an'ny Windows antsoina hoe Kaspersky Lab, inona marina no raketany ary nahoana no mandefa azy io ankehitriny?
Android Pay dia misy any Espana izao avy amin'ny tanan'ny BBVA
Rehefa afaka volana maro niandrasana dia farany tonga tany Espana teo am-pelatanan'ny BBVA ny sehatra fandoavam-bola Google Android Pay
Noontec Hammo HD, finday tsy misy tariby ihany koa ho an'ny trano
Izahay dia mampiseho ny famakafakana ny headphone Noontec Hammo TV, rafitra hi-fi tsy misy tariby natao ho an'ny tranonao.
FreedomPop dia mandray ny antso 4G sy mahazatra any Espana
FreedomPop dia nanodina ny tsena, nandefa serivisy vaovao afaka manararaotra ny tambajotra 4G ary mamela ny antso VoIP any Espana.
Ity teknolojia ity dia hahafahanao mameno ny fiara na ny baterinao finday afaka segondra
Noho ny asa farany nataon'ny University Drexel eo amin'ny sehatry ny supercapacitors, afaka mameno ny bateria finday ao anatin'ny segondra isika.
The Yayonauts, mora iharan'ny loza ateraky ny Internet
Ary ny zoky? Noterena hifanaraka amin'ny teknolojia vaovao ny Yayonauts ary izany no nahatonga azy ireo ho mora tohina indrindra.
Manatevin-daharana an'i Shina i Russia ary manakana ny VPNs koa
Nikambana amin'i Sina i Russia ary vao avy namoaka lalàna vaovao manery ny mpamatsy Aterineto hanakana ny fidirana amin'ny serivisy VPN
Ny Gmail Smart Answers dia misy amin'ny Espaniôla izao
Ny Gmail Smart Answers dia tsy amin'ny teny anglisy intsony no misy, fa ny ekipan'ny fampandrosoana dia nanampy fiteny vaovao: Espaniôla.
Ity no fomba mora indrindra hanaraha-maso ny tranonao amin'ny finday avo lenta
Fidirana izay hiresahantsika rafitra iray tena mora ampiharina hitantanana ny fanaraha-maso ny tranonao mandritra ny fialantsasatra fahavaratra.
Ny fifandraisana Internet any Espana, mbola anisan'ny lafo indrindra any Eropa ve izy io?
Nihena ny vidin'ny fifandraisana Internet any Espana. Taona maro lasa izay dia isika no faharoa lafo indrindra tany Eropa. Amin'ny 2017, mbola mitovy ihany ve isika?
Ireo no fiasa sy rindranasa izay hanjavona amin'ny fanavaozana manaraka ny Windows 10
Vao avy nanambara i Microsoft tamin'ny alàlan'ny bilaoginy izay ho fiasa sy rindranasa izay tsy ho hita intsony ao amin'ny kinova Windows manaraka
Espaniola dia mitarika fandoavam-bola tsy misy fifandraisana amin'ny vanim-potoana fandoavam-bola amin'ny finday
Nanjary i Espana, na eo aza ny fomban-drazantsika momba ny fanovana sarotra amin'ny fivoarana ara-teknolojia, ao amin'ny firenena iray izay mandoa vola tsy misy ifandraisana.
Resy tamin'ny krizy finday i Wolder any Espana
Wolder, orinasa iray izay narahantsika mihoatra ny indray mandeha tamin'ity haino aman-jery ity, dia ao anatin'ny ora farany izay, manambara ny fampiatoana ny fandoavam-bola sy ny fanidiana azy amin'ny ho avy.
Afaka mitsidika ny International Space Station isika izao noho ny Google Maps
Misaotra an'i Google Maps izay efa hitantsika tamin'ny fomba voalohany toa ny ahoana ny International Space Station
Deseat.me, diovy ny mailakao amin'ireo fisoratana anarana mahafaly ireo
Ianao ve dia iray amin'ireo izay misoratra anarana amin'ny serivisy marobe ary mahita ny boaty fampidirana anao feno Spam? Ao amin'ny Deseat.me manana ny vahaolana ianao
Hitsahatra tsy hiasa ny 20 septambra ny tonian-dahatsoratr'i YouTube
Hitsahatra tsy hiasa ny 20 septambra ny tonian-dahatsary zanatany izay ahitana ny YouTube, ka tsy maintsy manantona ireo tonian-dahatsoratra avy amin'ny antoko fahatelo izahay
Ny dia voalohany amin'ny Hyperloop dia akaiky kokoa noho ny nandrasana
Elon Musk dia nanamafy tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter azy ny iray amin'ireo vaovao andrasana indrindra izay manondro ny fitaterany ny Hyperloop ho avy
"Despacito", nataon'i Luis Fonsi sy i Daddy Yankee, no efa hira nilalao indrindra teo amin'ny tantara
Despacito, ilay hiran'i Luis Fonsi sy i Dada Yankee, no lasa hira nilalao indrindra nandritra ny fotoana rehetra namindra an'i Justin Bieber
Atomian, izany no anaran'ny Rahalahy Big ampiasain'ny FC Barcelona
Ny FC Barcelona dia mila mpitantana lehibe ny angona rehetra vokariny. Atomian dia miandraikitra ny zokiny lahy manokana
CCleaner manova ny tompony ary lasa anisan'ny Avast
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia hitantsika ny fomba nahazoan'ireo orinasan-rindrambaiko vaovao banga manan-danja ao amin'ny ...
Azo atao izao ny mamonjy GIF ao anaty ADN bakteria fecal
Ekipa iray mandrafitra ny mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Harvard no mahavita mitahiry GIF ao anaty ADN avy amin'ny bakteria fecal.
Nakatona ny WhatsApp tany Shina, olona iray traboin'ny The Great Firewall
Mety ho niharan'ny sivana lehibe tany Shina i WhatsApp. Ny tsy fahaizana mandefa haino aman-jery na hafatra an-tsoratra dia nampaneno ny fanairana
Ampidiro indray ny batterie finday mandritra ny dia an-tongotra
Ireo mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Jaén dia namorona tsanganana fitsangantsanganana elektronika izay hahafahantsika mikaona ny fitaovanay mandritra ny fotoana ankafizinay ny ambanivohitra.
HBO dia mandefa ny fampiharana ao amin'ny PlayStation ara-potoana ho an'ny Game of Thrones
Sony sy HBO dia nanambara ny tolak'andro lasa teo fa ny fampiharana HBO dia efa misy tanteraka amin'ny Playtation 4 sy PlayStation 3.
Kobo Aura H2O Edition 2 na ny fifaninanana lehibe an'ny Amazon's Kindle
Androany isika dia mamakafaka amin'ny antsipiriany momba ny Kobo Aura H2O Edition 2 vaovao, izay laharana ho iray amin'ireo mpamaky eReader tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny.
Manatevin-daharana ny lamaody Retro sy mini miaraka amin'ny Ataribox koa i Atari
Andao hojerentsika izay nafenin'ny Ataribox sy ny antony anaovany ampihimamba ny fonony manerana an'izao tontolo izao na eo aza ny habeny.
Ahoana ny fomba hahitana ireo teny miafina miafina ao ambadiky ny asterisk
Miaraka amin'ny tetika kely dia hanana ny fahitana ny teny miafina miafina ao ambadiky ny asterisk isika. Raha tsy tadidinao ny pass, izany no hahitanao azy.
Ny Nokia 8 dia miseho amin'ny fakantsary roa avy amin'ny ZEISS sy maro hafa
Fakan-tsary indroa, nosoniavin'i ZEISS ary loko manga mainty mahavariana. Izany no tanjon'ny Nokia hisarika ny fontsika indray.
Dingana iray manakaiky kokoa ny habetsaky ny Internet noho ny asan'ny mpikaroka sinoa
Ekipa iray misy ny mpikaroka sinoa no manakaiky antsika kely kokoa amin'ilay antsoina hoe habetsaky ny Internet noho ny fikarohana nataon'izy ireo.
Facebook dia hanampy ny safidy hamoronana GIF ao amin'ireo safidin'ny fakantsary
Ny safidy farany sedrain'ny Facebook amin'ny fampiharana lehibe indrindra dia ahafahantsika mamorona GIF mivantana toy ny hoe horonan-tsary izany
Amazon miasa amin'ny rindrambaiko fandefasan-kafatra azy manokana
Amazon dia hiasa amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra antsoina hoe Anytime izay hitondra fiasa vaovao sy fampidirina amin'ireo vokatra vokariny
Ahoana ny fampiasana kaonty mailaka vonjimaika
Mila mailaka vonjimaika ve ianao? Azavainay ny fomba fananganana kaonty mailaka vonjimaika hampiatoana ny fandraisana spam.
Internet amin'ny alàlan'ny fantsom-pahitalavitra, Microsoft dia nieritreritra izany
Microsoft dia te hanararaotra ny tsipika fahita amin'ny fahitalavitra tsy misy atiny hitondrana ny Aterineto amin'ireo mijaly amin'ny fizarazarana nomerika.
Ny telefaona KFC nataon'i Huawei izay tsy hamela anao tsy hiraharaha
Hahafantatra lalindalina kokoa isika hoe inona no nahatonga an'i Huawei hanamboatra fitaovana finday eo am-pelatanan'ny franchise sakafo haingana.
Harvard dia mamorona solosaina kuantum matanjaka indrindra amin'ny planeta
Ny Oniversiten'i Harvard dia nanao lohateny lehibe taorian'ny famoronana ilay heverina ho solosaina kuantum matanjaka indrindra eto an-tany.
Mpandrindra teny amin'ny Internet
Te hampiasa Word amin'ny Internet ve ianao ary maimaim-poana? Aza adino ny fisafidianana ireo mpikirakira teny an-tserasera maimaimpoana tsara indrindra amin'ny fanitsiana antontan-taratasy.
Google dia mandefa rindranasa hanao kopian'ny kapila mafy ao amin'ny Drive
Google dia vao avy nanangana rindranasa vaovao hitahiry karazana rakitra rehetra amin'ny solo-saintsika ao amin'ny Google Drive.
Mampiseho amintsika ny kalitao nasehon'ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny famerenana sary ny sary i Google
Fidirana izay hiresahantsika ny asa lehibe farany nataon'i Google, faharanitan-tsaina artifisialy afaka manitsy sary misy kalitao matihanina.
Mpanonta horonantsary maimaimpoana
Aza adino ireo mpamoaka horonantsary maimaim-poana tsara indrindra azonao sintonina ho an'ny Windows, Mac na Linux. Raha mila mpamoaka horonantsary ianao dia ho hitanao eto.
Ny fanaraha-maso Wifi dia mampahafantatra antsika raha azo antoka ny fifandraisantsika Wifi manoloana ireo fitsabahana mety hitranga. Azonao vonoina ny lakilen'ny WiFi? Jereo!
Ny smartwatch Louis Vuitton dia efa ofisialy na dia tsy azon'ny ankamaroan'ny olona aza ny vidiny
Louis Vuitton dia nanolotra ny smartwatch vaovao izay nantsoiny hoe Tambour Horizon ary vidiny 2.450 euro.
Facebook Messenger dia hampiseho doka amin'ny efijery an-tranonao
Taorian'ny fahombiazan'ny mpanamory fiaramanidina, Facebook Messenger dia hanomboka mampiseho doka manokana amin'ny fàfana an-trano amin'ireo mpampiasa manerantany
PayPal dia mifangaro amin'ny iTunes sy ny App Store efa ho telo ambin'ny folo taona taty aoriana
Efa ho 13 taona taty aoriana, afaka mandoa vola amin'ny alàlan'ny kaontinay PayPal mivantana izahay amin'ny farany.
Logitech koa dia mijery console, mividy Astro Gaming
Logitech dia niditra tamin'ny tsenan'ny audio tamin'ny alàlan'ny fividianana Astro, iray amin'ireo marika malaza amin'ny finday.
Ny governemanta Shinoa dia mandidy ny mpandraharaha hanakana ny fidirana amin'ny VPN
Ny tapany faharoan'ny governemanta sinoa hametra ny fidirana amin'ny Internet dia tonga amin'ny endrika fanakanana ny serivisy VPN mivantana amin'ny alàlan'ny mpandraharaha
Wonderboom avy amin'i Ultimate Ears, ilay mpandahateny tsy misy tariby izay manana azy rehetra [REVIEW]
Hodinihintsika lalina ny Ultimate Ears 'Wonderboom, ilay zandriny lahy mpandahateny mahery sy mahatohitra.
Veloma amin'ny Windows Phone 8.1
Niato ny fanolorana fanampiana ho an'ny Windows Phone 8.1 i Microsoft, ka tsy handray fanavaozana isan-karazany intsony ny mpampiasa
Ny fiara elektrika dia tsy mifanaraka amin'ny hafainganana ary manaporofo izany ny Lucid Motors
Ny orinasa farany te-hametraka tsara ny lohany amin'ny fiara elektrika lafo vidy dia Lucid Motors.
Azo alaina ao amin'ny Windows Store izao i Ubuntu
Azo alaina maimaimpoana izao ny Ubuntu avy amin'ny Windows Store ary amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fomba fametrahana azy.
Aza adino ireo fifanarahana tselatra Amazon Prime Day (11 Jolay)
Androany dia te hampiseho aminao ny tolotra "flash" mahaliana indrindra izahay mandritra ity andro voalohan'ny Andro Iraisampirenena ity any Amazon,
Manamafy ny ady amin'ny troll ny Twitter
Nanitatra ny sivana misy ny Twitter mba hampanginana ireo mpampiasa hafa ho toy ny dingana lavitra amin'ny ady amin'ny troll sy kabary fankahalana.
Ny LG G6 dia tsy mahatratra hatramin'ny DxOMark, amin'ny faratampon'ny taona 2016
Ny LG G6 dia latsaka kely amin'ireo fitaovana 2016 amin'ny sary, ary zavatra mety handiso fanantenana ny mpampiasa izany.
Aza adino ireo fifanarahana tselatra Amazon Prime Day (10 Jolay)
Androany dia te hampiseho aminao ny tolotra "flash" mahaliana indrindra izahay mandritra ity andro voalohan'ny Andro Prime amin'ny Amazon ity.
Ny bateria lehibe indrindra eto an-tany dia avy any Tesla ary any Aostralia
Tesla dia ho tompon'andraikitra amin'ny fametrahana bateria lithium lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny fahafaha-manana 100 MW amin'ny toeram-pambolena rivotra any Aostralia atsimo
Nokia sy Carl Zeiss mifandray tanana indray taona maro taty aoriana
Androany Nokia dia nanamafy fa miara-miasa amin'i Zeiss izy ireo hanolotra valiny kalitaon'ny mpampiasa ao amin'ny fizarana sary.
Hofafan'ny Google ny rohy 2.500 miliara amin'ny fisintomana tsy ara-dalàna, ampy ve?
Nanambara i Google fa efa namafa rohy maherin'ny 2.500 tapitrisa amin'ny fisintomana tsy ara-dalàna, izay firaketana tsy mahafapo ny indostria
Iris, ny solomaso lalao izay atolotry Newskill antsika [REVIEW]
Ny solomaso Newskill Iris dia mikasa ny hahafahanao mampivelatra ny fahafahanao feno rehefa milalao satria tsy mila miahiahy momba ny fahasalaman'ny masonao ianao.
Amin'ny 2040 dia tsy afaka mividy lasantsy na fiara diesel intsony ianao any Frantsa
Nanambara ny minisitry ny tontolo iainana frantsay fa amin'ny 2040 dia ny herinaratra ihany no fiara amidy.
Ireo no lalao maimaim-poana ao amin'ny PS Plus ho an'ny Jolay sy tolotra mahaliana hafa
Hasehonay aminao izay lalao PlayStation Plus maimaim-poana amin'ny volana Jolay, ao anatin'izany ny mandra-maraina sy ny lalao seza fiandrianana.
Ahoana ny fampitomboana ny hafainganan'ny WiFi ao an-tranonay
Miadana ve ny Internet? Aza adino ireo torohevitra sy tetika ireo mba hanafainganana ny fifandraisanao ary hahitana raha angalarina ny WiFi anao.
Snapchat dia manohy manatsara hatrany
Snapchat dia mandefa fanavaozana vaovao feno vaovao: mizara rohy ivelany, manova ny feonao ary manova ny ao ambadika
Facebook mandika ny app Houseparty hamoronana fampiharana antso an-tsary
Facebook dia mifantoka amin'ny horonan-tsary, izay rehetra mitranga amin'ity endrika ity dia mahaliana azy, na ho sehatra iray ...
Azo atao izao ny mankafy lalao PlayStation 4 isan-karazany amin'ny PC
Rehefa ela niandrasana dia azo atao izao ny mankafy kilalao PS4 marobe amin'ny solosaintsika, misintona azy ireo avy amin'ny PlayStation Now.
WIM sy WIM Lite no filokana haingam-pandeha farany an'i Wiko
Tianay holazaina aminao ny vidiny ary mazava ho azy izay toetran'ny Wiko WIM sy WIM Lite vaovao, ireo tonga vaovao roa eny an-tsena.
Manomboka amin'ny taona 2019 dia hivarotra fiara mandeha amin'ny herinaratra sy hybrid fotsiny i Volvo
Ny orinasan'ny Volvo dia nanao fanambarana ampahibemaso izay nilazany fa manomboka amin'ny taona 2019 dia handefa fiara mifangaro na feno herinaratra fotsiny izy ireo.
Fihenam-bidy manokana ho an'ireo mpampiasa Amazon Prime
Ny talata 11 jolay ho avy izao no ankalazana ny fanontana fanindroany ny fetin'ny praiminisitra, saingy misy fihenam-bidy ihany koa ho an'ireo mpampiasa prime ny isa.
Mandraisa anjara amin'ny fianaranay momba ny fampiasana finday avo lenta
Ampahafantaro ny zokiolona fa mampidi-doza ny tsy fampiasana finday avo lenta amin'ny andraikitra ary hialana amin'ny fisolokiana toy ny asa Rikati.
Movistar manetsiketsika ny tsenan-telefaona miaraka amin'ireo fonosana Fusion vaovao 45 euro
Movistar dia handefa fonosana Fusion vaovao amin'ny 9 Jolay izay hisongadina noho ny toetrany sy ny vidiny ambany.
Netflix dia manomana taha vaovao any Espana araka ny fivoahana farany farany
Ny tsy nanananao dia ny mety indrindra fa hanavao ny tahan'ny vidiny any Espana i Netflix, ary mampiseho azy ireo ny tranonkalany.
Ireo no smartphone 14 Xiaomi izay hahazo Android 7.0
Xiaomi dia nanangana ofisialy ireo smartphone 14 izay hahazo Android 7.0 ary amin'ny tranga hafa dia misy eo hatrany ny Android 7.1.
CRISPR, teknolojia ahafahana manapaka sy manova ny filaharana ADN
Hilaza aminao izahay hoe inona ny CRISPR ary inona izany teknolojia manaitra izany, izay mamela ny fanapahana sy ny fanovana ny filaharana ADN.
Elitetorrent dia nampidina ny jamba 13 taona taty aoriana
Ny tranonkala farany torrent izay noterena hanidy dia ny Elitetorrent.net veteran
Ny Tesla Model 3 voalohany dia hamely ny tsena alohan'ny faran'ny volana Jolay
Ny singa voalohany amin'ny Tesla Model 3 dia hamely ny tsena amin'ny 28 Jolay, indrindra fa hisy 30 unit
Ity no fomba nandaniantsika azy tao amin'ny PlayStation VR Resort hitsapana ny lalao rehetra
Ity no fomba nandaniantsika azy tao amin'ny PlayStation VR Resort nanandramana ny lalao rehetra ary tonga tamin'ny famaranana lehibe momba ny Virtual Reality.
Vodafone dia hanome anao Facebook tsy voafetra sy Spotify miaraka amin'ny tahan'ny
Vodafone dia hamela anao hijerena Facebook, Instagram, Spotify ary koa tambajotra sosialy sy serivisy malaza amin'ny fomba tsy voafetra.
Ny mini LG G6 dia ho zava-misy atsy ho atsy na dia eo aza ny anaran'ny LG Q6
Ny mini LG G6 dia ho tena zava-misy atsy ho atsy na dia manana anarana hafa sy mihena aza ny famaritana raha ampitahaina amin'ny LG G6.
Manavao ny takelaka misy azy ny SPC ary mandefa laharam-peo mandritra ny fahavaratra
SPC dia manolotra ny Groovy Collection vaovao, safidin'ireo mpandahateny tsy misy tariby miaraka amin'ny fifandraisana Bluetooth izay hiaraka aminao na aiza na aiza halehanao amin'ity fahavaratra ity.
Samsung Galaxy Note 7 nohavaozina dia hiverina amin'ny magazay amin'ny 7 Jolay
Rehefa avy nesorina tamin'ny tsena izy noho ny olan'ny bateria, ny Samsung Galaxy Note 7 dia hiverina eny an-tsena, nohavaozina tanteraka, amin'ny 7 Jolay
Ho tompon'andraikitra amin'ny heloka bevava ampiasain'ny mpampiasa i Facebook
Ny lalàna vaovao any Alemana dia mampiady hevitra be izay hametraka ny haino aman-jery nomerika ho tompon'andraikitra amin'ny hevitr'ireo mpampiasa azy.
Ny fampiharana Facebook dia mamela antsika hahita fifandraisana Wi-Fi maimaim-poana
Ny fanavaozana farany izay voarain'ny rindrambaiko Facebook dia ahafahantsika mitady fifandraisana Wi-Fi maimaim-poana eo akaikin'ny toerana misy antsika.
Operation Rikati, mpisoloky an-tapitrisany amin'ny Android ary ahoana no hisorohana azy
Niditra an-tsehatra tambajotram-pifandraisan-davitra ny vondrona Heloka Bevava Telematic an'ny mpiambina sivily izay namitaka tamin'ny alàlan'ny fisolokiana sandoka.